Aiza ny gorodona mainty mainty sy fotsy? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Aiza ny gorodona mainty mainty sy fotsy?
Ahitsio: Denny　2019-12-13　Mobile
Hitanay fa be dia be ny olona mitady ny gorodona ao an-dakozia. Mila endrika modely, retro, mainty sy fotsy alàlan'ny loko ny loko, loko mainty sy fotsy, navy manga sy fotsy Checkerboard, mainty sy fotsy Checkerboard.
Ny refy dia mitaky 18x18, ary ny kaody tsirairay 18-inci dia manana kianja mainty sy fotsy 9 9 9.
Manantena fa ao anaty tahiry izao, azonao atao ny mandidy fa tsy miandry, ary manolo azy ny valin'ny vinazo tsara kokoa.
Manaikitra ny filan'ny mpampiasa izahay ary manandrana manome fahafaham-po ny olon-drehetra haingana araka izay azo atao.
Aiza ny gorodona mainty mainty sy fotsy? Ny atiny mifandraika
Ny gorodona vinyl avo lenta (LVF) dia fehezanteny vaovao izay mirakotra tsipika vita amin'ny vinyl fika avo lenta (LVT) ary valiny vita amin'ny vinyl avo lenta (LVP). Ny safidy ny sokajy mifanandrify...